Madaxweyne Farmaajo oo maanta saxiixaya sharciga dhismaha guddiyada la-dagaallanka Musuq-maasuqa – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo maanta saxiixaya sharciga dhismaha guddiyada la-dagaallanka Musuq-maasuqa
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu saxiixo sharciga dhismaha guddiyada la-dagaallanka Musuq-maasuqa ee heer federal iyo heer dowlad-gobolleed.
Agaasime ku xigeenka Warfaafinta Madaxtooyadda Soomaaliya Mudane C/rashiid Maxamed Xaashi, ayaa sheegay in sharcigan uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh dalka.
“Sharcigan waxaa uu madaxweynaha saxiixi doonaa maanta barqadii. Sharciga waxaa uu badbaadin doonaa hantida dadweynaha Soomaaliyeed, sidoo kale waxaa uu dalka ku ridi doonaan, dhabaha dowlad-wanaaga iyo hufnaanta”, ayuu yiri agaasimaha.
Musuq-maasuqa waa cudurka halakeeya dowladnimadda iyo horumarka, sidaa darted in guddigaasi la dhiso waxaa ay hormar u noqon doontaa wadanka iyo jihada uu qabsan doono, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Sharciga dhismaha guddiyada ladagaalanka Musuq-maasuqa, waxaa uu soo marar heerar kala duwan, waxaana xiligan uu taaganyahay marxaladiisii ugu dambeysay ee uu ku saxiixi lahaa Madaxweynaha Jamhuuridda Soomaaliya, si uu u dhaqan-gallo.
“Musuqa waa uu noocya-badanyahay sida xeerkan ku qoran, waxaa kamid ah laaluushaka, xatooyada, ku dirqi laaluush ruux kale, ku xad-gudub awood xafiiseed, eex, qaraaba-kiil, goboleysi, qabyaalad, daneysi xoolo xafiis iyo been abuur qoraallo iyo dukumentiyo dowladdu ay leedahay, dhammaan cidii lagu heno intan waxaa uu sharciga u tixgelinayaa nooc kamid ah musuq-maasuqa”, ayuu yiri agaasimaha.
Fadlan nala joog, si aad ula socoto sharcigan iyo marka uu saxiixo madaxweynaha.